१० Hulu मा सर्वश्रेष्ठ एनिमे (२०२०) - हेर्नु पर्छ सूची - मनोरञ्जन
१० Hulu मा सर्वश्रेष्ठ एनिमे (२०२०) - हेर्नु पर्छ सूची
एनिम हालका समयमा सबैभन्दा बढ्दो विधाहरू मध्ये एक हो। यसले मुख्य प्रवाहका मिडियालाई कडा प्रतिस्पर्धा दिइरहेको छ। अधिकांश एनिमेसनहरू जापानबाट उत्पादित हुन्छन्, र तिनीहरूसँग फ्यानबेस ठूलो छ। ती दिनहरू गए जब एनिमेलाई 'कार्टुनहरू' भनिन्थ्यो।
यस सूचीमा हामी छलफल गर्न सक्नेछन उत्तम उत्तम एनिमेस जुन तपाईं सक्नुहुन्छ Hulu मा हेर्नुहोस् यो वर्ष। सूचीमा केहि प्रसिद्ध एनिमे जस्तै नारुटो र डेथ नोट र केहि लुकेका रत्नहरू अकीरा र जोजो बिज्जारे एडभेन्चर समावेश छन्, जुन तपाईंले प्रयास गर्नु पर्छ।
प्रेम एनिमे श्रृंखला? त्यसो भए जाँच गर्नुहोस् KissAnime & समान वेबसाइटहरू
शीर्ष १० एनिम श्रृंखला Hulu मा हेर्नको लागि:
१. मेरो नायक एकेडेमिया
D..5 को एक IMDb रेटिंगको साथ, यो तपाईंले हेर्नुहुने सबैभन्दा सभ्य anime हो। कल्पना मात्र स्कूलको सुपरहिरोको लागि? होइन, म एक्स-मेनको बारेमा कुरा गरिरहेको छैन। यस एनिममा, नायकले खलनायकबाट बदमासी बचाए पछि, एक औसत विद्यार्थीलाई एक महाशक्ति दिइन्छ जसले उसलाई नायकोंको लागि उच्च माध्यमिक तालिम एकेडेमीमा जान अनुमति दिन्छ।
यो सामान कती राम्रो छ? कथाको बारेमा कुनै बिफलकर्तालाई नदिई, यो एनिमेस एक अधिक लोकप्रिय हो, र सम्भावनाहरू यो तपाईंलाई मनपर्दछ। यदि तपाईं अनौपचारिक अवलोकनमा हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए यो तपाईंको लागि anime हो। र त्यहाँ चार मौसमहरू हेर्न र रमाइलो गर्न।
२.जोजो विचित्र साहसिक
यस एनिमेसनको एनिमेसन शैली एक प्रकारको हो। D..4 को आईएमडीबी रेटिंगको साथ, यो एनीम हो तपाईंले आफैमा संलग्न गर्नु। सारांश निम्नानुसार छ: जोस्टार परिवारको बहुविध पुस्ता, सबै उही उपनामको साथ, एक अवधिभरमा अलौकिक खलनायकको सामना गर्दछ। त्यसो भए यो दैनिक हेरफेर सामग्री मध्ये एक होइन।
तपाईले मस्तिष्कलाई कथाको चारै तिर घुमाउनु पर्छ। यदि तपाइँ Kamehameha र ड्र्यागन बॉल z बाट विस्फोटक विस्फोटहरू मनपराउनु हुन्छ, तब संभावना छ कि तपाइँ यस एनिमेसलाई प्रेम गर्नुहुनेछ। साथै, तपाईंले मास्क फिल्मबाट केहि समानताहरू पाउनुहुनेछ। Asonsतुहरूको कुल संख्या is हो।
Ow. काउबय बेबप
यस सूचीमा सबैभन्दा पुरानो एनिमेस मध्ये एक २००१ प्रीमियरि.। एनिमेसन शैली सब-पार हो त्यसैले तपाईंको स्वादसँग मेल नखान सक्छ। यो जासूसहरूका टोलीमा आधारित छ जो भविष्य कारनाम र बाउन्ट शिकारमा जान्छन्। यो एक कार्य / साहसिक विधा हो यो जासूस जडहरु को लागी सही।
पात्रहरू एकदम सास हुन्, र शीर्षमा, तपाईं अनौठो कथाको बारेमा चिन्ता नगरी एपिसोडहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जसमा यो केवल एक मौसम हो, तपाईं यसलाई कुनै समयमै समाप्त गर्नुहुनेछ यदि त्यो तपाईंको चिन्ताको विषय हो। यस एनिमको IMDb रेटिंग 8..9 छ। Asonsतुहरूको कुल संख्या।
One. एक पंच मानिस
हालसालैका वर्षहरूमा, तपाईले '१०० पुश-अप, १०० स्क्वाट्स, १०० सिट अप, त्यसपछि १० किलोमिटर रन' भन्ने वाक्यांश पाउनुहुनेछ। प्रत्येक दिन यो गर्नुहोस्! '। शब्द यो एनिमेसबाट हो। २०१ 2015 मा रिलीज भयो, एनिमेले धेरै लोकप्रियता पायो। नामले देखाउँदछ, वन-पंच नायक सायतामाले कुनै पनी कुनै पञ्चले मार्न सक्छ। त्यो तपाईंलाई थाहा पाउनु आवश्यक छ।
उनलाई टियर सूचीमा सब भन्दा बलियो एनिम नायकहरू मध्ये एक मानिन्छ। यो केवल एउटा पन्चले विशाल भौंलाहरूलाई मार्दा उसको लागि रमाईलो छ। एनिमेसको पनि सेटामा केही चुटकुले छ किनकि ऊ तालुमा छ, जसले वातावरणलाई उज्यालो बनाउँछ। IMDb रेटिंग 8.8 छ। चलिरहेको asonsतुहरूको कुल संख्या २ हो।
T. टिटानमा हमला
यो एनिमेस एकदम माथि छ, रगत, मासु र सबै प्रकारका चीजहरूसँग जुन तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ। टिटानमा आक्रमणलाई 8..8 को IMDb रेटिंगको साथ हिड्न मृतको एनिम संस्करण भनिन्छ। नायकको गृहनगर नष्ट भए पछि र उनकी आमा मारिए पछि, उनले विशाल मानवोद टाइटनहरूको पृथ्वी सफा गर्ने वाचा गरे जसले सम्पूर्ण मानवतालाई मेटाए।
टायटनमा आक्रमण शुद्ध ड्रामा हो र तपाईंलाई सम्भावित सबै भावनाहरूमा हिट गर्दछ। चरित्रको विकास एकदम राम्रो छ, र सबैजना अन्तिम सिजन आउन पर्खिरहेका छन्। सीजनहरूको कूल कम्तिमा संख्या is हो।
Tok. टोकियो घोल
यो पनि एक दयालु anime को एक मानिन्छ, र प्रत्येकले आफ्नो जीवनमा कम्तिमा एक पटक यो हेर्नु पर्छ। टोकियो मानिसहरु जस्तो तर तिनीहरूको शरीर मा भोज, भूतले लागी शिकार भएको छ। एक भूत-मानव संकरको रूपमा, केन Keneki आफूलाई दुई संसार बीचको समातिएको पाउँदछन्। यो एनिमेसको सबैभन्दा बिघ्नबाट मुक्त वर्णन हो।
एनिमेस शुरू देखि नै आकर्षक भईरहेको छ र तपाइँलाई आफ्नो सीटहरुमा चिपकाउँछ। त्यहाँ कुनै फिलर एपिसोडहरू छैनन् जसले एनिमेलाई छोटो र मीठो बनाउँदछ। IMDb रेटिंग 9.9 छ, र seतुहरूको कुल संख्या १ हो।
Nar. नारुतो शिपुडेन
यस सूचीमा सबै भन्दा राम्रो anime। एक टुक्रा, ड्र्यागन बल, र नारुटोलाई एनिमेसको जग भनिन्छ। नारुतो शिपुडेन प्यारो नारुटो श्रृंखलाको अनुसरण गर्दछ। यदि तपाईंलाई थाहा छैन भने, नारुटो निन्जा हुन् जो होकाज बन्न चाहान्छन् जस्तोसुकै भए पनि, र प्रक्रियामा उनले धेरै चीजहरूको त्याग गर्नुपर्‍यो। शिपुडेन तब हुन्छ जब नारुतो हुर्कन्छ र ऊ जिराइया अन्तर्गत प्रशिक्षणबाट फर्किएपछि आफ्नो यात्रा जारी राख्छ।
यदि तपाईं सीधा नारुटो शिपुडेनबाट सुरू गर्दै हुनुहुन्छ भने, केहि चीजहरू दिमागमा राख्नुहोस्: सासुके नारुटो र सकुराको सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धी हो र शोको लागि अत्यन्तै बेकार हो। त्यो हो; अब तपाइँ नारुटो शिपुडेनको मजा लिन सक्नुहुन्छ। यो anime दश वर्ष को लागी D..6 को IMDb रेटिंगको साथ गयो। सबै भन्दा प्रसिद्ध anime। त्यहाँ कुनै मौसम छैन, तर शो मा ep०० एपिसोडहरू सम्मिलित छन्। तिनीहरू मध्ये केही फिलरहरू हुन्, त्यसैले कहानीको लागि एक आँखा बाहिर राख्नुहोस्।
बाइक र गट-रेन्चिंग कार्य सवारीलाई माया गर्नुहुन्छ? ठिक छ, त्यसो भए यो तपाईंको लागि anime हो। वर्ष १ 1998 1998 Release मा रिलीज भयो, यो एनिम अकल्पनीय रूपमा टोकियो प्रतिनिधित्व गर्दछ। एनिमेसन शैली पुरानो हो, र तपाईं डेडपूलसँग केहि समानताहरू फेला पार्नुहुनेछ। सारांश निम्नानुसार छ: यो एक गुप्त सैन्य प्रोजेक्ट खतरामा पर्दछ जब यसले बाइकर गिरोहको सदस्यलाई रैम्पि phys फिजिक साइकोपाथमा परिणत गर्दछ।
यो केवल दुई किशोर र मनोविज्ञानको एक समूह द्वारा रोक्न सकिन्छ। यो एनिमेसको प्रकार होइन जुन सबैले रमाईलो गर्थे, तर तपाईंले जाँच गर्नु पर्छ।
Er। एर्गो प्रोक्सी
यो त्यहाँ बाहिर सबै डराउने प्रशंसकहरूको लागि हो। यो एनिमेसनले पूर्ण रूपमा कार्य र डरावनी विधालाई समाहित गर्न सक्दछ, जुन सामान्यतया सँगसँगै जान सक्दैन। विषय एक पोस्ट-apocalyptic दुनिया मा सेट अप गरिएको छ जहाँ इंस्पेक्टर Re-I Mayer एर्गो प्रोक्सी भनेर चिनिने राक्षसको खोजी गर्न सुरु नगरेसम्म मानिस र एन्ड्रोइड शान्तिमा बस्छन्।
केवल २ ep एपिसोडहरूको समावेशले, यसले एनिमेस छोटो राख्छ। यस एनिमको लागि आईएमडीबी रेटिंग .0.० छ र २०० 2006 मा जारी गरिएको थियो। seतुहरूको कुल संख्या १ हो।
१०. मृत्यु नोट
यो सबैको लागी एक अत्यावश्यक छ। यो एनिम वास्तविकताको सब भन्दा नजिक छ; नायकका सबै चालहरू सापेक्ष छन् र सायद उही चीजहरू जुन तपाईं आफ्नो ठाउँमा भएको भए तपाईंले गर्नुहुने थियो। युगमी लाइटको संसारमा प्रवेश गर्नुहोस्; ऊ स्वर्गबाट ​​खसेको डेथ नोट प्राप्त गर्दछ जहाँ यदि उसले कुनै कारण उल्लेख नगरी नाम लेख्यो भने एक व्यक्ति 30० सेकेन्ड भित्र हार्ट अटैकले मर्नेछ।
र्युक एक शैतान हो जसले लाइटलाई मद्दत गर्दछ र एल उसलाई घृणा गर्ने अपराधको दुनिया सफा गर्नबाट रोक्न खोज्ने एक व्यक्ति हो। धेरै अनुकूलनहरू वर्षौं बखत भएका छन्, जुन सबैभन्दा लोकप्रिय animes मध्ये एक हो। प्रत्येक चरण प्रकाश द्वारा गणना गरिएको चाल हो। यो मानिसका लागि सिफारिश गर्ने एनिमेस हो जुन भर्खर एनिमे हेर्नको लागि सुरू गरिरहेछन्। यस सूचीको उच्च आईएमडीबी रेटिंगको साथ, डेथ नोट यसमा9.० छ। Asonsतुहरूको कुल संख्या १ हो।
ठीक छ, यसले २०२० मा Hulu मा हेर्नको लागि शीर्ष एनिमेको सूचीलाई समाप्त गर्दछ। सूचीबाट हाम्रो मनपर्नेहरू मृत्यु नोट, नरुटो शिपुदेन, टोकियो घोल, र एक पंच म्यान हुन्। हामी आशा गर्दछौं कि यस सूचीमा तपाईंको लागि बिन्ज वाचको लागि तपाईंले केही एनिमेस प्राप्त गर्नुभयो। यदि तपाईंसँग कुनै थप add-ons वा सुझावहरू छन् भने, कृपया यसलाई टिप्पणी बाकसमा छोड्नुहोस्।
nox अनुप्रयोग प्लेयर - एन्ड्रोइड इमुलेटर
सबै टिभी श्रृंखला नि: शुल्कका लागि अनलाइन हेर्नुहोस्
म्याकको लागि उत्तम नेटफ्लिक्स अनुप्रयोग
कसरी नेटफ्लिक्स डीभीडी रद्द गर्ने